Tuesday May 07, 2019 - 14:24:10 in Wararka by Warqabadka Koonfurta soomaaliya
Madaxda Dowlad Goboleedyadda ku shiraya magaalada Garowe ayaa waxa ay dhamaantood soo bandhigeen danaha iyo caqabada hortagan degaanadooda gaar ahaan dhibaatada ay ka sheeganayaan Dowlada Dhexe.
Jubbaland, Galmudug, Puntland iyo Hirshabeela ayaa eed dusha kala kordhacay Farmaajo iyo kooxdiisa ayaga oo ku eedeyay in dhibaato joogta ay ku hayaan deeganadaas, sidoo kale waxa ay sheegeen in lacag ka maqan tahay taas oo ay xaq ugu lahaayeen dowlada dhexe. Dowlad Goboleedyada qaar waxa ay sharuud ku xireen joogitaanka shirka hadii aan dowlada dhexe raali galin ka bixin dhibaatada ay ka geysteen deegaankooda.
Qaar ka mida madaxda dowlad goboleedyada ayaa sheegay in Cabdicasis Xassan Lafta Green uu shirka intiisa badan uu ku dhameystay aamusnaan oo ka aamusan yahay ka hadalka xaalada u gaarka Koonfur Galbeed iyo tan guud ee Soomaaliya.
Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed ayaa door weyn ku lahaan jirtay qaabeynta shirarka noocaan ah isla markaana waxa ay saameyn ku yeelan jirtay go’aanada ka soo baxa shirarka heerka qaran. Ma aha kaliya in uu maqan yahay codka iyo dareenka reer Koonfur Galbeed balse waxaa iyadana maqan karaamadii ay ku lahaayeen shirarka noocaan ah.
Lafta Gareen oo shirka u kaxeeystay koox dhalin yaro ah oo aan wax badan kala socon xaalada deegaanka KG ayaa u dhaqmaya sii in ay qayb ka yihiin wafdiga Madaxweyne Farmaajo iyada oo markastaa Lafta Gareen ku raacayo talooyinka uu soo jeediyo Farmaajo.